Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa | UCT Students
Home > Prospective students > Welcome > Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa
Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa!
Le webhusayithi iyilelwe ukunceda wena ufunde malunga nobomi kunye nomsebenzi kweli ziko likwinqanaba eliphezulu ehlabathini. I-UCT ineekhampasi ezintandathu, kuquka ikhampasi ePhezulu, ePhakathi neseZantsi; i-Hidding Campus; i-Health Sciences Campus; kunye ne-Breakwater Campus, nenekhampasi elihlumelo entsha esanda kumiswa e-Philippi. Ukuba ucinga ngokufunda e-UCT, nceda uze usityelele kwenye yee-open day (usuku oluvulele uwonke-wonke) zethu, okanye yenza amalungiselelo ne-Ofisi yoKuthatha aBafundi yethu ukuze wenze ukhenketho olunomkhokeli lweli ziko lethu libukekayo.
I-UCT luluntu lwabafundi, ootitshala kunye nabaphandi ababalasele ngokukodwa – kunye nentlaninge yeengcali, abaxhasi bolawulo kunye nabasebenzi abancedisayo – bebonke bazinikele ekuncedeni ukuguqula eli hlabathi libe yindawo engcono. Siyakhuthazana ukuba sisebenze kakhulu, singasebenzeli nje ukufumana izidanga nokunconywa kuphela, koko sisebenzele nokuba ziinkokheli kweli hlabathi liya litshintsha ngokutshintsha.
Umbono wethu kukuba yiyunivesithi yase-Afrika equka wonke umntu, esebenza kakhulu kwezophando nequbisana nemingeni yala maxesha ngokufundisa, ngophando nangeendawo zokusebenza ezisemagqabini. Njengeyunivesithi sizinikele ekukhuthazeni iinguqu, ekusebenzeni ngokungenamikhinkqi ukuze siqinisekise ukuthwaleka kweli ziko lethu, nasekuqinisekiseni ukubalasela kuko konke esikwenzayo.
I-UCT inesithethe sokuzingca ngokubalasela kwezemfundo kwaye ngokwangoku iyiyunivesithi engungqa phambili e-Afrika kwaye yenye yeeyunivesithi ezingoongqa phambili ehlabathini. Abaphandi bethu bayaqhubeka nokuncedisa ukudala izisombululo zeengxaki zehlabathi ezisekelwe kwiimeko zase-Afrika, ngxaki ezo eziquka imiba emayelana nokutshintsha kwemo-zulu, ubomi basezidolophini, ukhuseleko nokhuselo, imfundo nezempilo, xa sikhankanya nje ezimbalwa. Abaphandi abaninzi base-UCT ziinkokheli zehlabathi ezibalulwayo kumacandelo ezemfundo abasebenza kuwo, nto leyo ethetha ukuba ukuba ukhetha ukufunda apha kuthi, uya kuhlala ukrotyiswa kumsebenzi wezemfundo wamvanje nezinto ezifunyaniswa kuphando zamvanje.
Ukongeza ekunikezeleni ngokufundisa okubalaseleyo, i-UCT ikhuthaza abafundi ukuba baqinise izakhono zabo zobunkokheli nezokukhonza. Simema abafundi bethu ukuba bathathe inxaxheba kumaphulo amaninzi okuvolontiya awenzeka kuluntu lwasekuhlaleni, ukuba babe ngamalungu asebenzayo kwimibutho engaphezu kwe-100 nemibutho yezemidlalo engaphezu kwengama-40 apha kule khampasi, okanye babuyekeze eli ziko ngokuthatha inxaxheba kulawulo lwabafundi.
I-UCT inoluntu oludlamkileyo, olunemvelaphi eyahlukileyo noluyingxubevange yabantu. Abasebenzi kunye nabafundi bethu bavela kwiindawo ezininzi ezahlukileyo eMzantsi Afrika, kananjalo nakumazwe angaphezu kwe-100 kwi-Afrika iphela nakwihlabathi jikelele. Wonke umntu unento anokwenza igalelo ngayo kubulunga nokukhula kwe-UCT, kwaye injongo yethu kukuqinisekisa ukuba wonke umntu uziva esekhaya ngeli xesha elapha.
Imfundo ephezulu ayiphelelanga nje ekuvuleni iingcango kumathuba engqesho achulumancisayo, koko ikwanceda ekwakheni le domokhrasi iselula yoMzantsi Afrika. Ukuba ngummi olungileyo kufuna ukuba ngamnye kuthi aqondane nemiba ilizwe lethu elihlangabezana nayo ikunye noxanduva esinalo umntu ngamnye. Ngale ndlela, imfundo inganceda ukutshintsha uluntu luphela, kwaye abo baphuma ezandleni ze-UCT, ngoku benza igalelo elingummangaliso eluntwini ngezakhono abazifunde apha.
Nangona sinemingeni emininzi esigxalathelene nayo njengeyunivesithi nanjengelizwe, ndikholelwa ekubeni eli lixesha elimnandi lokuba se-UCT. Eli lixesha elinikezela ngethuba lokwenziwa kweenguqu zokwenene.
Ngu-Njingalwazi Mamokgethi Phakeng